एक शिक्षक: जसले कालोपाटीमा आकृति कोरेर कम्प्युटर सिकाउँछन्
अन्नपूर्ण शनिवार, फागुन १९, २०७४ 4756 पटक पढिएको
कालोपाटीमा आकृति बनाएर माइक्रोसफ्ट वर्ड पढाउँदै घानाका शिक्षक रिचर्ड । तस्बिर: रिचर्डको फेसबुक वालबाट
एजेन्सी: केही दिनयता एकजना व्यक्तिको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ। यी व्यक्तिले अन्य मानिसले कल्पना समेत नगरेको विधि प्रयोग गरेर कम्प्युटरको ज्ञान दिएपछि उनी अहिले हिट भएका हुन् ।
यी व्यक्तिले कुनै पनि ल्‍याप्टप या डेस्कटप कम्प्युटरको सहयोग नै नलिई मज्जाले कम्प्युटर सिकाउँछन् भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्ला । तर सत्य यही हो, यी शिक्षकले ब्ल्‍याक बोर्डमै कम्प्युटरका सबै पार्ट्सको तस्बिर बनाएर विद्यार्थीलाई कम्प्‍युटर शिक्षामा पोख्त बनाउँछन् ।
कुनै कम्प्यूटरको सहयोग नै नलिई आफ्ना विद्यार्थीलाई कम्प्युटर प्रशिक्षण दिए अद्भुत काम गरेका यी व्यक्ति हुन् अफ्रिकन मुलुक घानाको कुमासी क्षेत्रका बासिन्दा ।
समाचार अनुसार घानाको कुमासी इलाका निवासी रिचर्ड एप्पिया एकोटोले नामका एक शिक्षकले आफ्ना छात्रा छात्रालाई दैनिक कम्प्युटरको सहयोग नै नलिई कम्प्युटरको कम्प्यूटर प्रौद्योगिकीको शिक्षा दिइरहेका छन् । उनी स्कुलको क्लासरूममा रहेको एक कालोपाटीको सहयोगमा कम्प्युटर शिक्षा दिन्छन् ।
रिचर्डले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा पढाउने यस्तो विधि देखेर जो कोही पनि मन स्तब्ध हुन सक्छ । सबैले सोच्छन्, आखिर कोही किन कम्प्युटर बिना कसरी कम्प्युटर शिक्षा पढाउन सक्छ ?
यदि तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन भने यहाँ राखिएका तस्बिर हेर्नुहोस् । यी फोटोले आफैँ समाचारका यी अक्षरलाई पुष्टि गर्न सक्षम छन् । हो रिचर्डका यी तस्विर सामाजिक सञ्जालमा दैनिक भाइरल भइरहेका छन्। समाचार अनुसार यी तस्बिर गत महिना फेसबुकमा हालिएको थियो ।
यी तस्विरमा तपाईँले रिचर्डले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको आकृति कालोपाटीपाटीमा कोरेर कसरी विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ । उनले यही आकृतिको सहयोगमा विद्यार्थीलाई कम्प्युटर शिक्षा दिन थालेको धेरै भइसकेको छ ।
यो मामिला विश्वमाझ तब आयो जब जब रिचर्डले स्कूलमा कम्प्युटर क्लासका यी तस्बिर आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा पोस्ट गरे । त्यसपछि यी तस्बिर रातारात सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । यी तस्बिर यति धेरै भाइरल भए कि यसबारेको सबै जानकारी माइक्रोसफ्टको अमेरिकास्थित हेड अफिससम्म पुग्यो ।
हजारौँ पटक सेयर गरिएका यी तस्बिर भाइरल भएपछि सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । फोटो भाइरल भएपछि माइक्रोसफ्टले कुमासास्थित यस स्कुलमा नयाँ कम्प्युटर पठाउने बाचा गरेको छ ।
रिपोर्ट अनुसार रिचर्डले बताए अनुसार सन् २०११ देखि यता हालसम्म यो स्कुलमा एउटा पनि कम्प्युटर थिएनन् । यहाँ विद्यार्थीलाई पास हुनका लागि सूचना र सञ्चार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्छ । यसका बावजुद स्कुलमा एउटे कम्प्युटर थिएनन्। उनले आफ्ना विद्यार्थीको भविष्य बिग्रिने चिन्ताले बाध्य भएर यसरी पढाउन परेको बताएका छन् ।
बुधवार, चैत ७, २०७४ रोबोट सोफिया भन्छिन्: प्रविधिको सहयोगले भ्रष्टाचार हट्छ
७ अर्बको सामानमा भन्सार छली 1008
५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग 3764
किन शक्तिशाली बन्दैछन् सी र पुटिन ? 3784
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कटौती, ४७ बाट २८ मा झारियो 1234
सरकारी विद्यालयमा सीसी क्यामरा 35
एक सय १० पुराना सवारी जफत 351
सुन्धाराको गुलाब मिठाई पसलमा आगलागी (फोटो फिचर) 888
श्रीमान जोगाउन सम्धीमाथि सम्धिनीद्वारा बलात्कारको आरोप.. 3366
रोबोट सोफिया भन्छिन्: प्रविधिको सहयोगले भ्रष्टाचार हट्छ 1195
दुई वर्षीय बालकले ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन 10758